तपाइँ को कम्पुटर ढिलो खुल्छ ? नो चिन्ता छिटो खुल्ने बनाउने तरिका यस्तो छ ~ Khabardari.com
तपाइँ को कम्पुटर ढिलो खुल्छ ? नो चिन्ता छिटो खुल्ने बनाउने तरिका यस्तो छ
3:40 AM admin 1 comment
हामीले कम्प्युटरमा विभिन्न सफ्टवेयरहरु इन्स्टल गर्दा खासै ध्यान नदिइ अघिल्लो अघिल्लो स्टेपमा गइरहेका हुन्छौं।
विभिन्न सफ्टवेयरको इन्स्टल गर्दाको डिफल्ट सेटिङ कम्प्युटरसँगै खुल्ने भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम खुल्नासाथ क्रमैसँग त्यस्ता सफ्टवेयरहरु खुल्न थाल्छन्। जसले गर्दा कम्प्युटरको स्वीच अन गरेपछि तपाइँले चलाउनका लागि तयार बन्नका लागि कम्प्युटरले समय लिन्छ।
तर यसखालको खुल्नमा हुने ढिलाइलाई कम गराएर छिटो कम्प्युटर खुल्ने बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसका लागि तपाइँले कम्प्युटरसँगै खुल्ने सेटिङ भएका सफ्टवेयरहरुलाई कम्प्युटरसँगै नखुल्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा कम्प्युटर अन हुनासाथ सबै सफ्टवेयरहरु खुल्दैनन्।
तपाइँलाई कम्प्युटर खुल्नासाथ सबै खालका सफ्टवेयर एकै पटक चाहिने पनि होइन। आफूलाई चाहिएको समयमा खोल्न सकिने भएकाले त्यस्ता सफ्टवेयरलाई कम्प्युटरसँगै खुल्ने नबनाउने हो भने तपाइँको कम्प्युटर छिटो खुल्ने बन्छ।
यदी तपाइँ वीण्डोज एक्सपी चलाउनुहुन्छ भने सिधै स्र्टार्ट मेनुमा रहेको रनमा गएर msconfig टाइप गरेर अघि जान सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि कम्प्युटरले रिस्टार्ट माग्छ। र तपाइँले रिस्टार्ट गरेपछि कम्प्युटर छिटो खुल्छ।
September 28, 2013 at 7:11 PM Reply
Mero computer ma pani yasto problem chha, kasari solve garne bhane ra chintita thiyo i will try2use the given steps